Bariis khudaar, digaag iyo kaluunka | Cunnooyinka jikada
Bariis leh digaag iyo squid
Sida ay yihiin quiches ama croquettes, bariis wuxuu noo ogolaadaa inaan ka faa'iideysano walxahaas ku firidhsan qaboojiyaha. Xaaladdayda waxay ahayd laba gadaal digaag iyo giraan xayawaan ah; labada maaddadoodba tan ayaan ku sameeyay karinta goosashada, fudud laakiin aad u dhadhan fiican.
Haddii ay tahay bariis digaag dhaqameed Waxaan sidoo kale ku darnay xoogaa khudrad ah iyo squid, natiijada kaliya waa ay fiicnaan kartaa. Bariiskan qalalan, oo lagu sameeyay kaliya 45 daqiiqo, waa soo jeedin weyn dhamaadka usbuuca. Qoyska oo dhami way jeclaan doonaan, waxaan kuu xaqiijinayaa. Way ka sii hodansan doontaa haddaad ka dhigto maraq digaagga; laakiin waad isticmaali kartaa biyaha hadaadan rabin inaad isku murgiso. Miyaan hoos ugu degno?
200 g oo bariis ah
1/2 basbaas gambaleel cas
2 digaag dambeedka, la jarjarey oo la nadiifiyey
150 g squid (ama siddooyin)
2 qaado oo yaanyo cajiin ah
500 ml. maraq digaagga
Dhowr dun oo hufan ah
Waxaan ku bilaabaynaa jarjarida basasha, basbaaska iyo toonta. Digsi hoose waxaan ku shubnay xoogaa saliid ah iyo kari daqiiqado, Taasi ma heli karto inay midab qaadato.
Waxaan ku darnaa digaagga xawaash iyo kariyo ilaa bunni dahab ah. Kadibna waxaan ku darnaa iskudhiska iyo yaanyada isku urursan, kareyneynaa oo karsaneynaa isku dar ah daqiiqado si yaanyada ay u yaraato ka hor intaan lagu darin bariiska.
Ku dar bariiska iyo saffron oo si fiican u walaaq dhowr daqiiqo ka hor intaadan ku darin maraq. Maraq ku dar, kulul, oo kari ilaa 18 daqiiqo, marka hore kuleylka badan ka dibna jilicsan.
Marka bariiska la dhammeeyo karintiisa ha nasato dabka ka bax oo maro ku dabool laba daqiiqo oo dheeri ah.
Macluumaad dheeraad ah- Spinach, likaha iyo ham quiche, Croquettes digaag si ay uga faa'iidaystaan ​​bowdyaha Consommé
Waqtiga diyaarinta Daqiiqado 10
Waqtiga karinta Daqiiqado 30
Wadarta waqtiga Daqiiqado 40
Kiilooriyada halkii adeeg 320
Cuntada Isbaanishka, Cunnooyinka Hilibka
Cunto karinta waxay ka mid ahayd waxyaabaha aan xiiseeyo ilaa caruurnimadaydii waxaanan u adeegi jiray dameerka hooyaday. In kasta oo aysan wax yar ku lahayn xirfadeyda hadda, karinta ... Eeg astaanta>
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Cunnooyinka Aduunka » Cuntada Isbaanishka » Bariis leh digaag iyo squid
Salad laga buuxiyay bariis leh boqoshaada